သင်က Start ခင်မှာ | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
သငျသညျစတင်ရန်မီ, သငျသညျ Evinrude နှင့်ဂျွန်ဆင်ပဲ့ချိတ်များ၏သမိုင်းအပေါ်အချို့သောစာဖတ်လုပ်ဖို့လိုပေမည်။ ငါစိတ်ဝင်စားဖွယ်အောက်ပါဆောင်းပါးများ, 100 ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ခုလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနေသူများကဖန်တီးသောသူ Oli Evinrude အကြောင်းကိုအထူးသဖြင့်ပုံပြင်များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ခုသံသရာအဏ္ဏဝါအင်ဂျင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ Oli Evinrude နှင့်သူ၏အလုပ်နားလည်ခြင်းသင်တို့သည်ဤမော်တာ၏ဆင့်ကဲအဘို့ကြီးစွာသောလေးမွတျကိုငါပေးမည်။ အောက်ကဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ Oli Evinrude Milwaukee တွင်တစ်မြစ်ပေါ်တွင် 1909 တစ်ခုပဲ့ချိတ်မော်တော်၏သူ၏ပထမဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်ကြိုးစားခဲ့ဘယ်လိုပြောပြသည်။ ကြောင်းတည်နေရာမှာသို့မဟုတ်မည်သူမဆိုထိုကဲ့သို့သောသမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်၏ 100 တစ်နှစ်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှတ်ချက်ချထားပါတယ်လျှင်မည်သည့်သမိုင်းဝင်အမှတ်အသားလည်းမရှိဆိုပါကကျွန်မတွေးမိ။ ငါ Milwaukee တွင်မိသားစုရှိသည်, သငျသညျဤသည်နေ့ရက်ကာလ၏တဦးတည်း, ငါသည်အသေးငယ်တဲ့လှေနဲ့ကျွန်မရှိသည်အသက်အကြီးဆုံးမော်တာယူနဲ့ကျွန်မပဲငါရှိ၏ဟုပြောန်းကျင်ကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်နိုင်အောင်ကြောင်းတည်နေရာကိုရှာဖွေမယ့်သူဖြစ်ကြောင်းကိုအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။ ငါလှေမော်တာ၏သမိုင်းအပေါ်ပိုမိုဖတျရှုရန်စီစဉ်ထားသည်။ အဆိုပါဂျွန်ဆင်မော်တော်ကော်ပိုရေးရှင်း Terre Haute Indiana ပြည်နယ်အချို့ညီအစ်ကိုတွေကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်သာ 60 မိုင်ငါအသက်ရှင်ရှိရာကနေပါ! Oli Evinrude လည်းပဲ့ချိတ်လှေမော်တာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်နျဆာပခဲ့သူတစ်ဦး၏သား, Ralph Evinrude ရှိပါတယ်။ Ralph Evinrude OMC အဖြစ်ယနေ့လူသိများသောပဲ့ချိတ်မော်တော်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန် 1936 အတွက်ဂျွန်ဆင်နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ ကားလ် Kiekhafer 1940 အတွက်မာကျူရီအဏ္ဏဝါစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ကုမ္ပဏီနေဆဲယနေ့ခိုင်မာတဲ့မယ်။ မာကျူရီလည်း Two-သံသရာပဲ့ချိတ်လှေမော်တာအတွက်တိုးတက်မှုများစွာကိုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ကားလ် Kiekhaefer, မာကျူရီရေကြောင်းကုမ္ပဏီသမိုင်းကိုတည်ထောင်သူ
သငျသညျစတင်ရန်မီ, သင်တိုအတိအကျဘာမော်တာထွက်ရှာရန်လိုအပ်သည်။ သင်တစ်ဦးပြန်အမ်းငွေအဘို့ထိုသူတို့ပြန်လာရန်ရှိသည်မှန်ကန်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဝယ်ယူရန်နှင့်မချနိုင်မှနှစ်မော်ဒယ်နှင့်သင့်မော်တာ၏နံပါတ်စဉ်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ A ကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကုန်သည်တို့သည်သင်တိုအရာကိုသိမဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့မော်တာများအတွက်သင်သည်တစုံတခုကိုရောင်းချချင်မည်မဟုတ်။ မော်ဒယ်နှင့်တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးခန့်မှန်းရုံအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လှေမော်တာ၏တစ်နှစ်မေ့လျော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်လွယ်ကူသောဖို့အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဟောင်းလှေမော်တာဆည်းပူးခဲ့လျှင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်သည်အဘယ်အရာတစ်နှစ်နှင့်မော်ဒယ်မသိရပါဘူးနေကြသည်။ အဆိုပါမော်ဒယ် number ကိုအောက်ပိုင်းယူနစ်၏လက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှပူးတွဲပါသတ္တု tag ကိုအပေါ်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုသွားနှင့်သူကလျှပ်စစ်သို့မဟုတ်ကြိုးက start ရှိမရှိ, ထိုကဲ့သို့သောယခုနှစ်အဖြစ်မော်ဒယ် number ကိုမှသတင်းအချက်အလက်ရယူထားခြင်းကိုမည်သို့လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်က်ဘ်ဆိုက်များ, တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ရှည်လျားရိုးတံနှင့်, မော်တာအမေရိကန်သို့မဟုတ်ကနေဒါထံမှရှိမရှိနဲ့တူဖြစ်နိုင်သည်သည်အခြား features တွေရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါမော်တာ၏ဆေးသုတ်အရောင်သင်ကတစ်နှစ်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ သင်သည်သင်၏မော်တာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးတာနဲ့, သင်မည်မျှနှင့်အထူးသဖြင့်မော်တာထုတ်လုပ်ခဲ့သောအရာကိုအနှစ်တစ်အဓိပ္ပာယ်ရနိုင်သည်။ အခြားအမော်တာများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းသင်၏အမော်တာအပေါ်အလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါကွောငျ့စိတျအပိုငျးတည်နေရာမှကြွလာသောအခါဤအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါရှာဖွေနေခြင်းဖြင့်အများကြီးသင်ယူ E-ဂလားပင်လယ်အော် အလားတူမော်တာနှင့်ရောင်းသူသူတို့ကိုအကြောင်းကိုပြောတာပေါ့အဘယျသို့ဖတ်နေ။ အဆိုပါလည်းသူတို့ထိုက်တန်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတစ်ဦးအယူအဆအရအကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏။ သငျသညျတစျဆငျ့ကိုတူးရန်စတင်အဖြစ် E-ဂလားပင်လယ်အော်သငျသညျပင်သင်၏အမော်တာကောင်းတစ်ဦးစျေးနှုန်းမှာကိုကမ်းလှမ်းခံရ fit လိမ့်မည်ဟုအချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုကြည့်ရှုရန်စတင်လိမ့်မည်။
ငါပဲ့ချိတ်စက်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ဘာသာရပ်အပေါ်အချို့စာအုပ်တွေရဖို့ကအသုံးဝင်သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာနှစ်ခုသံသရာပဲ့ချိတ်လှေမော်တာအလုပ်မလုပ်ဘယ်လိုဖတ်ရှုဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ပိုကျွန်မဖတ်ပါနှင့်နားလည်သဘောပေါက်, ပိုမိုဒီစက်တွေရှိပါတယ်ဘယ်လောက်လှပရိုးရှင်းတဲ့တန်ဖိုးထားတယ်။ သင့်ဒေသခံစာကြည့်တိုက်သို့သွားရန်နှင့်သင်ဝန်ဆောင်မှုလက်စွဲနှင့်အထွေထွေပဲ့ချိတ်မော်တော်ပြုပြင်စာအုပ်တွေရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရှိရာရည်ညွှန်းအပိုင်းများတွင်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့တိကျတဲ့မော်တာဖုံးလွှမ်းထားတဲ့တစ်ဦးကဝန်ဆောင်မှုကို manual အစဉ်အမြဲအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအခြို့သောကောင်းသောအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေချင်တယ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်မအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကိုစတိုးဆိုင်၏ Napa ကွင်းဆက်တစ်ဦးအဏ္ဏဝါအစိတ်အပိုင်းများ catalog ကိုကမ်းလှမ်းနှင့်ငါ၏အံ့သြစရာမှ, ငါသည်သူတို့မဒေသခံဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာမှာစတော့ရှယ်ယာအတွက်လိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများစတိုးဆိုင် CarQuest တူညီတဲ့စိတျအပိုငျးနံပါတ်များကြောင်း Napa အသုံးပြုသူများနှင့်တူညီသောအရာဖြစ်သောသူတို့၏ "Sierra ရိန်းအစိတ်အပိုင်းများ Catalog" ရှိပါတယ်။ စိတျအပိုငျးလိုအပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုထွက်ရှာဖွေခြင်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလိုအပျသောအရာကိုသိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, Napa လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုရဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ သင်တို့သည်လည်းကောင်းတစ်ဦး OMC အဏ္ဏဝါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သည်ကိုရှာဖွေချင်တယ်။ ငါလှေကုန်သည်မှာပစ္စည်းပစ္စယဝယ်ဖို့နှင့်သူတို့၏မြင့်လက်လီစျေးနှုန်းများဆပ်ဖို့မကြိုက်ဘူး, ဒါပေမယ့်သင်သာရှိရနိုင်မယ့်အရာတွေရှိပါတယ်။ သငျသညျအဏ္ဏဝါအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အစျေးဝယ်နိုင်ပါတယ်ရှိရာ web ပေါ်မှာတော်တော်များများသောနေရာများရှိပါသည်။ သင်သင်သည်အဘယ်သို့ဝယ်ယူနေကြသည်သင်သည်သင်၏ပဲ့ချိတ်မော်တော်များအတွက်လိုအပ်သောအရာကိုအမှန်တကယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏သေချာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအကုန်သည်တွေနဲ့အတူပြဿနာကိုသူတို့မော်တာ၏ကျယ်ပြန့များအတွက်အစိတ်အပိုင်းများရောင်းဆီသို့ orientated နေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ငါ၏အစီမံကိန်းများတွင်, သင်တို့ကိုငါငါကိုအသုံးပြုကြောင်းတိကျသောစိတျအပိုငျးဝယ်နိုင်ဘယ်မှာ Amazon.com မှလင့်များရှိသည်။ အမေဇုံကနေဝယ်ယူဒီ site ကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်နောက်ထပ်စီမံကိန်းများကိုရန်ပုံငွေကူညီပေးသည်။ လုပ်ဖို့နောက်ထပ်အရာကဖုန်းစာအုပ်ထဲတွင်ဖွင့်ကိုကြည့်နှငျ့သငျအနီးတစ်လှေဆယ်တင်ခြံရှိလြှငျကိုတွေ့မြင်သည်။ ငါအသက်ရှင်ရုံန်းကျင်ကိုကြည့်ဖို့အဲဒီမှာသွားပျော်မွေ့ငါနေတဲ့တိုတောင်းသော drive ကိုဖြစ်သည့် Indianapolis ၏တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်တဦးတည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံရှိ mechanics ရဲ့လုပျ-It-ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတို့ကကူညီချင်ပါတယ်လို့လူတွေကပြုပြင်ဘို့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်ရှိရာတော်တော်များများကောင်းသောဆွေးနွေးမှုပျဉ်ပြားရှိပါသည်။ တစ်ခုမှာ site ကိုငါသဘောကျတယ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပါသည် http://www.iboats.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi ငါသည်သူတို့၏ဟောင်းလှေမော်တာတက် fix ချင်သူကိုငါကဲ့သို့သောလူများမှမေးခွန်းများကိုဖတ်နေကနေအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ ငါတောင်မှနှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့်မှာမေးခွန်းများကို posted ပြန်မိနစ်အတွင်းကောင်းသောအဖြေကိုရတယ်ပထမဦးဆုံးစုံတွဲကြိမ်အံ့သြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆွေးနွေးမှုပျဉ်ပြားပေါ်ဤအကြောင်းယောက်ျားတွေအချို့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအမှန်တကယ်အဏ္ဏဝါ mechanics ရဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအဖြေကိုအကြံဥာဏ်နှင့်ပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်ငါ့ကိုနဲ့တူယောက်ျားတွေကူညီပေးနေကြိုက်နှစ်သက်ပုံရသည်။ အသက်တာ၌ဘာမှနှင့်ဝသကဲ့သို့, သင်ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးကွဲပြားခြားနားသောဖြေရှင်းနည်းများပူဇော်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဦးခေါင်းကျော်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသို့ရလျှင်သင်ကိုကယ်တင်ရန်ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်သူတစ်ဦးကိုဒေသခံစက်ပြင်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိမိတ်ဆွေတစ်နေရာချထားနေရာချထားဖို့လည်းအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌ငါ LawnBoy ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုတဲ့သူမိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသည်။ သူလည်းသူ့လူငယ်တစ်ဦး Marina မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်များစွာသောငှားရမ်းထားသောပဲ့ချိတ်စက်ပြုပြင်ခဲ့ရသည်။ ဤအအင်ဂျင်ပိုမိုလွယ်ကူတက်စာ၏အလုပ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်များစွာကိုလှည့်ကွက်ရှိပါသည်။ သူတို့ကကျောင်းစာအုပ်ဖြေရှင်းချက်မကျမည်အကြောင်းကြောင့်သင်ဝန်ဆောင်မှုလက်စွဲတွင်ဤလှည့်ကွက်များစွာကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အလုပ်လုပ်ဖို့နေရာကောင်းစီစဉ်ထားပါ။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌, ငါကားဂိုဒေါင်နှင့်အခြေခံ tools များရှိသည်။ ငါမော်တာအချို့ $ 5.00 sawhorse ကွင်းခတ်ပြီးစုံတွဲ 2x4 ရဲ့နဲ့အတူမတ်တပ်ရပ်စေ၏။ ငါအဆင်ပြေအမြင့်မှာငါ့ပဲ့ချိတ်မော်တော်ညှပ်တဲ့အခါမှာဒါသည်ငါ့မော်တာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အပိုရှည်လျားခြေထောက်နှင့်အတူပဒေသာရပ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါသည်ငါ့ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာစီမံကိန်းများကိုပြုကြသောအခါ, ငါအစိတ်အပိုင်းများနှင့် tools တွေထွက် lay တစ်ခေါက်စားပွဲကို set up ပြုလုပ်ပြီးစီးမှီတိုင်အောင်ငါ့စီမံကိန်းကြောင့်စားပွဲထိပ်ကရည်စူးမှကြိုက်တယ်။ ငါသွားသည်အခြားစားပွဲပေါ်ရှိအခြားစီမံကိန်းများရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့စီမံကိန်းများကိုထရောရလိုကြပါဘူး။
အလျင်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ မျှော်လင့်, သင်သည်သင်၏ခံစားခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့ဤလုပ်နေတာ။ ငါ့အဘို့, ဒီငါလွှတ်တီဗီကနေအိမျတျောထဲကငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတော်ကြာတနင်္ဂနွေနှင့်ညနေခင်းများအတွက် tinkering လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ငါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ရှိရာအမှတ်ရလျှင်, ငါရိုးရှင်းစွာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့ cleanup အလုပ်မရပ်တန့်နှင့် ထွက်. ငါဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီလိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အရပါလိမ့်မယ်။ ငါမဆိုထုတ်လုပ်မှု mode ကိုပေါ်, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်တစ်ဦးအတွက်ဤမော်တာအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဖြစ်လျှင်, ငါ 'ငါမှာအားလုံးကပျော်မွေ့မယ်လို့ထင်ကြပါဘူး။ ငါသည်ငါ့ခံစားခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့ဤလုပ်နေတာငါကတည်းကကျွန်မဝါသနာဖြစ်ဤမော်တာတွင်လုပ်ကိုင်, ငါလက်ျာဘက်အလုပ်လုပ်ချင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်စဉ်းစားပါ။
ကျေးဇူးပြု ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းများစာမျက်နှာအားဆက်လက်ရန်။